Daawo: Madaxweynaha Faransiiska oo meel fagaare ah wejiga looga dharbaaxay - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Madaxweynaha Faransiiska oo meel fagaare ah wejiga looga dharbaaxay
Daawo: Madaxweynaha Faransiiska oo meel fagaare ah wejiga looga dharbaaxay
Paris (Caasimada Online) – Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron ayaa fadeexad xooggan la kulmay maanta kadib markii qof shacab ah uu dharbaaxo ku dhuftay isaga oo booqanaya gobolka Drome ee dalka Faransiiska.
Muuqaal fiidiyow ah oo ay baahisay warbaahinta Faransiiska ayaa muujinayay nin gashan funaanad damis ah oo xiran muraayadaha indhaha iyo maaskaro wejiga ah oo ku dhawaaqaya “Ha dhaco Macron” kahor inta uusan dhirbaaxo wejiga uga dhufan Macron.
Macron ayaa la arkayey isaga oo u socda dad badan oo ku sugna goobta oo ka dambeeyey bir ku hor-gudbaneed kadibna gacanta u fidinaya dadweynaha si uu u salaamo, waxaana markiiba dharbaaxo ku dhuftay nin ka mid ah dadkaas.
Ilaalada Macron ayaa qabtay labo nin, kadib markii madaxweynaha Faransiiska uu ninkaas wejiga ka dharbaaxay.
Koox ka socota amniga madaxweynaha ayaa si deg-deg ah u soo fara-geliyay, waxaana la rumeysan yahay in gacan ka hadalka ka dhanka ah Macron uu intaas kasii badan lahaa.
Dhacdadu waxay dhacday markii uu Macron booqday gobolka koonfur-bari si uu ula kulmo maqaayadaha iyo ardayda si uu ugala hadlo sida ay noloshu caadi ugu soo noqonayso maaddaama la khafiifiyey xayiraadahii Covid-19 ee dalkaas.
Madaxda ka hadashay dhacdadaan oo uu ugu horeeyay Ra’iisal wasaaraha Faransiiska, Jean Castex ayaa cambaareeyay dhacdadan kuna tilmaamay mid meel ka dhac ku ah dimuqraadiyadda.